Haddii aad meel fog ka hadlayso ama aad ka qayb galayso shirarka, ka faa'iidayso Zoom si aad si wanaagsan isu habayso oo aad ula shaqeyso ka qaybgalayaasha badan. Koorsadan, Martial Auroy, tababaraha shahaadaysan iyo lammaanaha Microsoft, ayaa soo bandhigaya qalabkan lagu wadaagayo iyo shirarka casriga ah. Si wada jir ah, waxaad ku dhex socon doontaan interface interface ee PC, Mac iyo casriga. Waxaad arki doontaa sida shirka loogu biiro, dadka loogu yeedho, loo qorsheeyo dhacdooyinka, iyo martigeliyaha. Markaa, waxaad la wareegi doontaa shaashadda wadaagga, wareejinta faylka, tafatirka ama duubista fiidiyowga si aad u sii wado ururinta oo aad u ilaaliso socodka hufan ee macluumaadka ama tababarka.
Waxyaabaha muhiimka u ah Zoom Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
READ Hordhac STAPS
horeAasaaska Google Drive
socdaKu qor emayl jawi xirfad leh